Kuisa & Kugadzira - Pandawill Technology Co, Ltd.
PaPandawill, ese mabhodhi anozovharirwa mumasaga akajeka, akajeka ekutsiva asina kuisa zvirimo kune kumwe kupisa, uye nenzira iyo kurongedza kunogona kuvhurwa pasina kumanikidza kwepanyama pane mapaneru mukati.
Pane zvakawanda zvakanakira iyi kurongedza nzira:
✓Iko kurongedza kwakajeka sekristaro uye nekudaro zvinokwanisika kuongorora kana kutarisa bhodhi zvakadzama pasina kuvhura pasuru uye nekuisa mabhodhi kuti aenderere kubata kana kuvaratidza iwo mavhu uye mwando.
✓Mabhegi anogona kuvhurwa zviri nyore nekasi kana banga pane kubvarurwa, uye kana vhuvhu raputswa, kurongedza kunosununguka uye mabhodhi anogona kubviswa pasina njodzi yekudzikira kana kukuvara.
✓Iwo mabhegi ane mapaneru anogona kuzoshandiswazve kunama chikamu huwandu, nokudaro achiwedzera hupenyu hwesherufu yezviri mukati.
✓Iyi nzira yekupakata haidi chero kupisa sezvo mabhegi akaiswa induction uye nekudaro iwo mabhodhi haana kuiswa pasi peasina basa maficha maitiro.
✓Mukuenderana needu ISO14001 kuzvipira kwezvakatipoteredza, kurongedza kwacho kunogona kushandiswa zvakare, kudzoserwa kana 100% kudzokororwazve.
Pane zvakawanda zvekutumira sarudzo kwauri zvinoenderana nemutengo, nguva uye vhoriyamu.
Na Express: semutengesi mukuru, isu takamisa hukama hwakanaka nemakambani anoratidza. Izvi zvinonyanya kuve zvidiki vhoriyamu, nguva yakakosha zvigadzirwa. Kunze kwebhuku redu rekutakura, tinogona kutumira neakaunti yako.
Nemhepo ine hupfumi ichienzaniswa neyekutaura uye inokurumidza kupfuura negungwa. Kazhinji kune epakati vhoriyamu zvigadzirwa.
Kazhinji kune yakakura vhoriyamu kugadzirwa uye inotungamira nguva haina kukurumidza kudaro. Uye ndiyo inodhura nzira yekusvitsa.